မန်မာငွေ သိန်း ၁၈၀၀ ကျော်တန် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ခွေးအကျီ င်္ | သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Home / featured / knowledge / မန်မာငွေ သိန်း ၁၈၀၀ ကျော်တန် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ခွေးအကျီ င်္
သင့်အနေနဲ့ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးကို ဘယ်လောက်ချစ်ပါသလဲ???
ဒီမေးခွန်းကို အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီခွေးအကျီ င်္ကို ဝယ်ဝတ်ပေးလိုက်ပါတော့...
ရွှေ ၂၄ ကာရက်ကို ဒီအကျီ င်္မှာ အသုံးပြုထားပြီး နာမည်ကျော် Swarovski ခရစ္စတယ်တွေ ၊ စိန်နက်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်။ ဒီအကျီ င်္ကို ဝတ်ထားပေးရင်တော့ သင့်ခွေးဟာ ဓားနဲ့ ခုတ်လည်း ဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင် ခွေးအချင်းချင်းကိုက်ရင်တောင် ရွှေထည်ကြီးကြောင့် အေးဆေးဖြစ်နေမှာပါ။
နာနို ရွှေချည်မျှင်တွေနဲ့ သေချာယက်လုပ်ထားပြီး "ရွှေအတိ ခြုံထည်" လို့ ဒီအကျီ င်္ကို တင်စားထားပါတယ်။
လူတိုင်း အံ့အားသင့်စေမယ့် ဈေးနှုန်းနဲ့ ဒီအကျီ င်္ကို ဈေးဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒေါ်လာ $137,000 (မြန်မာငွေ သိန်း၁၈၀၀) ဝန်းကျင်အထိ ဈေးပေါက်လာတာဖြစ်ပြီး Doggy Armour ကနေ ဒီအကျီ င်္ကို ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Unknown 25 October 2018 at 12:30
Ohhh !! ! how will be useful money if it is for the people who are very very poor as well as they can not have food and for the patients who are going to die if they don't have at least 10,000,000 MMK